Olee Mgbe Ịkpọasị Na-agaghị Adịkwa n’Ụwa?
ISIOKWU TETA! A Ịkpọasị Bụ Nsogbu Zuru Ụwa Ọnụ
ISIOKWU TETA! A Olee Mgbe Ịkpọasị Na-agaghị Adịkwa n’Ụwa?
DRAW CLOSE TO GOD Jehova “Adịghị Ele Mmadụ Anya n’Ihu”
Ọmarịcha Akwụkwọ A Chọwara Kemgbe Ọtụtụ Narị Afọ
Ànyị Kwesịrị Ikpegara Ndị Senti Ekpere?
TEACH YOUR CHILDREN Gịnị Ka Anyị Nwere Ike Ịmụta n’Akụkọ Otu Onye Omekome?
Ùnu Na-akwanyere Ndị Chọọchị Ọzọ Ùgwù?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Lithuanian Luo Malagasy Norwegian Nzema Oromo Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ụlọ Nche | Jun 2013
AFỌ iri ise gara aga, ya bụ, n’abalị iri abụọ na asatọ n’ọnwa Ọgọst n’afọ 1963, otu onye Amerịka a ma ama nke aha ya bụ Martin Luther King nke Nta, gwara ọhaneze okwu isiokwu ya bụ, “O Nwere Ihe M Na-atụ Anya Ya.” O ji isiokwu ahụ tọrọ ndị mmadụ ụtọ mee ka ha mara na ya nwere olileanya na otu ụbọchị, o nwekwaghị onye a ga-akpọ asị n’ihi agbụrụ o si. N’agbanyeghị na ọ bụ ndị Amerịka ka ọ gwara okwu ahụ, ọtụtụ ndị nọ ná mba dị iche iche chọkwara ka ihe ahụ o kwuru mee ná mba ha.
Mgbe Martin Luther King nke Nta na-agwa ọhaneze okwu
Ọnwa atọ nwoke a kwuchara ihe ahụ, ya bụ, n’abalị iri abụọ n’ọnwa Novemba n’afọ 1963, ihe karịrị otu narị mba so n’Òtù Mba Ụwa kwetara na ha ga-eme ka asị a na-akpọ ndị mmadụ n’ihi agbụrụ ha si kwụsị. Mgbe ọtụtụ iri afọ gachara, e nwekwara ihe ndị ọzọ mba dị iche iche kwetara na ha ga-eme ka ịkpọasị kwụsị. Ebe ọ bụ na a gbaala ezigbo mbọ ka ịkpọ ndị mmadụ asị n’ihi agbụrụ ha si kwụsị, ọtụtụ ndị na-ajụzi, ‘Kemgbe a gbawara mbọ a, olee ihe si na ya pụta?’
N’abalị iri abụọ na otu n’ọnwa Mach n’afọ 2012, onyeisi Òtù Mba Ụwa bụ́ Ban Ki-moon kwuru, sị: “E nweela ọtụtụ akwụkwọ a bịanyerela aka na ha na ọtụtụ ihe e kwekọrịtara na a ga-eme ka a kwụsị ịkpa ókè na asị a na-akpọ ndị mmadụ n’ihi agbụrụ ha, mba ha, ma ọ bụ ihe ndị yiri ha. N’agbanyeghị ihe niile a e merela, ihe na-ebe ka na-ebe. Ọtụtụ nde mmadụ ka na-ata ahụhụ n’ihi asị a kpọrọ ha na agbụrụ ha si.”
N’eziokwu, e nweela mba ụfọdụ a ga-asị na ịkpọasị akwụsịlatala na ha, ma ajụjụ a ka na-ajụ ná mba ndị ahụ bụ: Ndị mmadụ hà ewepụla ịkpọasị n’obi ha n’eziokwu, ka hà na-eme ihu abụọ, ka a ghara ịma na ha ka kpọrọ ndị ọzọ asị? Ụfọdụ ndị chere na naanị uru a na-erite ná mbọ a na-agba ná mba ndị ahụ bụ na ọ na-eme ka ịkpa ókè kwụsịlata, ma ọ gaghị eme ka ịkpọasị kwụsị. Gịnị mere ha ji chee otú ahụ? Ihe mere ya bụ na ọ bụrụ na mmadụ na-akpa ókè ma ọ bụ na-emegbu ndị ọzọ, ndị ọzọ ga na-ahụ ya, ndị ọchịchị nwekwara ike ịta ya ahụhụ. Ma, ọ bụrụ na mmadụ kpọrọ onye ọzọ asị n’obi ya, o nwere ike isiri ndị ọzọ ike ịmata ma ọ bụ ime ya ihe ọ bụla n’ihi na o nweghị onye ma ihe dị ya n’obi.
Nke a na-egosi na ihe ga-eme ka ịkpọasị kwụsị abụghị naanị ime ka ndị mmadụ kwụsị ịkpa ókè, kama a ga-emekwa ka ha kwụsị ihe ọjọọ ha na-eche banyere ndị agbụrụ ọzọ ma kwụsị ile ha anya ọjọọ. Nke a ọ̀ ga-emeli eme? Ọ bụrụ na ọ ga-emeli, olee otú ọ ga-esi eme? Ka anyị lebagodị anya n’ihe ụfọdụ ndị kwuru. Ọ ga-eme ka anyị mata na ndị mmadụ nwere ike ịgbanwe otú ha si ele ndị ọzọ anya, matakwa na o nwere ihe ga-enyere ha aka ime otú ahụ.
BAỊBỤL MERE KA HA KWỤSỊ ỊKPỌ NDỊ ỌZỌ ASỊ
“Akwụsịla m ịkpọ ndị ọzọ asị.”—Linda
Linda: A mụrụ m na Saụt Afrịka. Ọ bụrụ na mụ ahụ ndị Saụt Afrịka na-abụghị ndị ọcha, m na-ewere ha ka ndị ime ọhịa, ndị na-agaghị akwụkwọ, ndị na-anaghị akwụwa aka ọtọ, na ndị na-agbara ndị ọcha ohu. Asị m kpọrọ ha abụghị obere, amakwanụghị m na m kpọrọ ha asị. Ma, m gbanwere otú m si ele ha anya mgbe m bidoro ịmụ Baịbụl. Amụtara m na “Chineke adịghị ele mmadụ anya n’ihu” nakwa na ihe dị Chineke mkpa bụ obi mmadụ, ọ bụghị otú mmadụ na-acha na asụsụ onye ahụ na-asụ. (Ọrụ Ndịozi 10:34, 35; Ilu 17:3) Ihe Baịbụl kwuru ná Ndị Filipaị 2:3 mere ka m mata na ọ bụrụ na mụ ewere ndị ọzọ ka ndị ka m mma, m ga-akwụsị ịkpọ ha asị. Ime ihe ndị Baịbụl kwuru emeela ka m hụ ndị ọzọ n’anya n’agbanyeghị otú ha na-acha. Ugbu a, akwụsịla m ịkpọ ndị ọzọ asị.
“M mụtara otú Chineke si ele ndị mmadụ anya.”—Michael
Michael: Ebe m no too ná mba Ọstrelia bụ ebe ọtụtụ ndị ọcha bi. Nke a mere ka m kpọọ ndị si Eshia asị, karịchaa, ndị Chaịna. Mgbe ọ bụla m kwọ ụgbọala hụ onye yiri onye Eshia, m na-agbatulata windo ụgbọala m kpọọ onye ahụ iyi. Ihe m na-agwa onye ahụ bụ “Onye Eshia, ó rubeghị mgbe ị ga-ala obodo gị?” ma ọ bụkwanụ mụ agwa ya ihe yiri ya. Mgbe m mechara mụwa Baịbụl, m mụtara otú Chineke si ele ndị mmadụ anya. Chineke hụrụ mmadụ niile n’anya, n’agbanyeghị ebe ha si ma ọ bụkwanụ otú ha dị n’anya. Nke a metụrụ m n’obi, mụ amalite ịhụ ndị mmadụ n’anya ma kwụsị ịkpọ ha asị. Mgbanwe a m mere tụrụ m n’anya n’ihi na amaghị m na m ga-akwụsịli ịkpọ ndị ọzọ asị. Ọ na-atọ m ụtọ ugbu a iso ndị si mba dị iche iche na agbụrụ dị iche iche na-akpakọrịta. Nke a emeela ka m mụtakwuo ọtụtụ ihe, meekwa ka obi na-atọ m ụtọ.
‘M gbanwere otú m si ele ndị ezinụlọ papa m anya, ma mee ka mụ na ha kpezie.’—Sandra
Sandra: Mama m bụ onye Umunede nke dị na Delta Steeti, Naịjirịa. Ma, papa m bụ onye Edo Steeti. Ọ na-asụkwa asụsụ Esan. Ebe ọ bụ na papa m na mama m esighị n’otu obodo, ndị ezinụlọ papa m kpọrọ mama m asị ruo mgbe mama m nwụrụ. N’ihi ya, efooro m ntutu taa na o nweghị ihe ga-ejikọtakwa mụ na onye ọ bụla na-asụ asụsụ Esan. Ekpebikwara m na emekataghị m lụọ onye Edo Steeti. Ma mgbe m malitere ịmụ Baịbụl, m bidoro ịgbanwe obi m. Ebe Baịbụl kwuru na Chineke anaghị ele mmadụ anya n’ihu, nakwa na ọ na-anabata onye ọ bụla na-atụ egwu ya, m ghọtara na ekwesịghị m ịkpọ ndị mmadụ asị n’ihi agbụrụ ha si ma ọ bụ asụsụ ha na-asụ. Nke a mere ka m gbanwee otú m si ele ndị ezinụlọ papa m anya, ma mee ka mụ na ha kpezie. Ime ihe Baịbụl kwuru emeela ka m nwee obi ụtọ, meekwa ka obi ruo m ala. O meekwala ka mụ na ndị ọzọ na-akpa n’agbanyeghị agbụrụ ha, asụsụ ha, ma ọ bụ mba ha. Emechara m lụọ di. Ma, ị̀ ma obodo di m si? Ọ bụ onye Edo Steeti, ọ na-asụkwa Esan!
Gịnị mere ka Baịbụl nyere ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ aka ka ha kwụsị ịkpọ ndị ọzọ asị? Ọ bụ n’ihi na Baịbụl bụ Okwu Chineke. O nwere ike ime ka mmadụ kwụsị ile ndị ọzọ anya ọjọọ. Ihe ọzọkwa bụ na Baịbụl gwara anyị ihe ndị ọzọ a ga-eme ka ịkpọasị niile kwụsị.
ALAEZE CHINEKE GA-AKWỤSỊCHA ỊKPỌASỊ
N’agbanyeghị na Baịbụl na-enyere ndị mmadụ aka ịkwụsị ịkpọ ndị ọzọ asị, a ka nwere ụzọ ihe abụọ a ga-eme ka ịkpọasị kwụsịchaa. Nke mbụ bụ na a ga-ewepụ mmehie na ezughị okè. Baịbụl kwuru hoo haa, sị: “Ọ dịghị mmadụ ọ bụla nke na-adịghị eme mmehie.” (1 Ndị Eze 8:46) N’ihi ya, n’agbanyeghị mbọ niile anyị na-agba ka anyị kwụsị ịkpọ ndị ọzọ asị, e nwere ihe na-enye anyị nsogbu nke nyekwara Pọl onyeozi nsogbu. Pọl dere, sị: “Mgbe m chọrọ ime ihe ziri ezi, ọ bụ ihe ọjọọ na-adị n’ebe m nọ.” (Ndị Rom 7:21) Ọ bụ ya mere “echiche ọjọọ” na-eji abatakarị n’obi anyị na-ezughị okè ma na-eme ka anyị kpọọ ndị ọzọ asị.—Mak 7:21.
Ihe nke abụọ bụ na a ga-eme ka Setan bụ́ Ekwensu kwụsị iduhie ụmụ mmadụ. Baịbụl kpọrọ ya “ogbu mmadụ,” kwuokwa na ọ “na-eduhie elu ụwa dum mmadụ bi.” (Jọn 8:44; Mkpughe 12:9) Ihe a Baịbụl kwuru na-eme ka anyị ghọta ihe mere ịkpọasị ji zuo ebe niile, ọ bụkwa ya mere na ụmụ mmadụ enweghị ike ịkwụsịli ịkpa ókè, igbukpọ agbụrụ dị iche iche, na ihe ndị yiri ya.
N’ihi ya, a ga-ewepụrịrị mmehie, ezughị okè, na Setan bụ́ Ekwensu tupu ịkpọasị akwụsịchaa. Baịbụl kwuru na Alaeze Chineke ga-eme nke a.
Jizọs Kraịst kụziiri ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-ekpe ekpere, sị: “Ka alaeze gị bịa. Ka uche gị meekwa n’ụwa, dị ka ọ na-eme n’eluigwe.” (Matiu 6:10) Ọ bụ naanị Alaeze Chineke ga-ewepụcha mmegbu n’ụwa, wepụkwa ịkpọasị na ịkpa ókè.
Mgbe Alaeze Chineke ga-amalite ịchị ụwa, a ga-eke Setan “agbụ,” ya bụ, mee ka ọ kwụsị ịkpa ike, ka “o wee ghara iduhie mba niile ọzọ.” (Mkpughe 20:2, 3) Ọ bụzi mgbe ahụ ka a ga-enwe “ụwa ọhụrụ” nke ‘ezi omume ga-ebi n’ime’ ya. *—2 Pita 3:13.
A ga-eme ka ndị ga-ebi n’ụwa ọhụrụ ezi omume ahụ zuo okè, ya bụ, ka ha gharazie inwe mmehie. (Ndị Rom 8:21) Ndị ahụ Alaeze Chineke ga na-achị “agaghị emerụ ihe ọ bụla ahụ́, ha agaghịkwa emebi ihe ọ bụla.” Ọ̀ bụ n’ihi gịnị? Ọ bụ “n’ihi na ihe ọmụma Jehova ga-ejupụta ụwa dị ka mmiri si kpuchie oké osimiri.” (Aịzaya 11:9) N’oge ahụ, mmadụ niile ga-amụta ụzọ Jehova Chineke ma na-akpa àgwà ka ya. Ihe nke a pụtara bụ na ịkpọasị ga-akwụsịcha “n’ihi na Chineke adịghị ele mmadụ anya n’ihu.”—Ndị Rom 2:11.
^ para. 17 Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere Alaeze Chineke na ihe ndị ọ ga-eme n’oge na-adịghị anya, gụọ isi nke 3, nke 8, na nke 9 n’akwụkwọ bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya.
Gịnị Ga-eme Ka Udo Dịrị n’Ụwa?
Chọpụta otú Chineke ga-esi eme ka Alaeze ya weta udo n’ụwa.
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Ịkpa Ókè Agbụrụ?
È nwere agbụrụ ka ibe ya? È nwere mgbe a ga-akwụsị ịkpa ókè agbụrụ?
Jun 2013 | Olee Mgbe Ịkpọasị Na-agaghị Adịkwa n’Ụwa?
ỤLỌ NCHE Jun 2013 | Olee Mgbe Ịkpọasị Na-agaghị Adịkwa n’Ụwa?